Akụkọ - Anyị ji GuangDong aṅụrị
Na Mee 21, Guangzhou kọrọ akụkọ ọhụrụ enwetara nke COVID-19 na mpaghara Liwan. Okwu ikpe mpaghara bilitere ọzọ ụbọchị 276 ka enwetaghị ikpe ọhụrụ mpaghara na mpaghara Guangdong. Dị ka ozi nke nyocha ahụ si kwuo, onye ọrịa ahụ ebiwo na Guangzhou ụbọchị 14 tupu ọrịa ahụ amalite, na isi ihe ọ na-eme kwa ụbọchị dị nso n'ụlọ ya, ọ nweghịkwa akụkọ ihe mere eme na nso nso a nke ibi na mpaghara ndị nwere nnukwu nsogbu. na China ma ọ bụ ná mba ọzọ.
Gọọmenti ndị mmadụ na mpaghara Guangdong hibere ngwa ngwa usoro nzaghachi tozuru oke iji kwụsị mgbasa nke ọrịa na obere oge enwere ike ime mkpebi na ikike ọchịchị.
1. Lezienụ anya.
N'ụbọchị mbụ mpaghara enwetara ikpe gbasara COVID-19 ka akọpụtara na Guangzhou, kọmitii na-ahụ maka Kọmitii na-ahụ maka mpaghara CPC na otu ndị na-ahụ maka mgbochi na njikwa COVID-19 (isi ụlọ ọrụ) nwere nzukọ iji bute ya, kwusiri ike na nzaghachi ahụ. na ntiwapụ nke mpaghara kwesịrị ka e nye ụzọ kacha mkpa.
2. Nkpughe ozi n'oge.
Mgbe Guangzhou na Shenzhen kwuputara ikpe ikpe mpaghara yana ndị ọrịa asymptomatic mpaghara n'otu n'otu na Mee 21, obodo na mpaghara niile metụtara ozugbo gwara ọha na eze banyere ọnọdụ na mgbochi na njikwa. N'ime ụbọchị 11, ọ dịghị ihe na-erughị 10 ogbako ndị nta akụkọ naanị.
3. Nnwale acid nucleic.
A ga-eme ule nucleic acid zuru oke na mpaghara ndị dị mkpa iji chọpụta nje "na-ezo na ndò".
Ozugbo achọpụtara ọrịa a, igbochi usoro mgbasa ozi bụ ihe kacha mkpa, ebe a na-ahụ na akụ na ụba na ọha mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee. Naanị njikwa na njikwa nke sayensị na nke ziri ezi nwere ike ịbawanye uru ọha na eze, kama ịgwụ kpuru ìsì na izu ike, ma ọ bụ "ọnọdụ agha".
5.Sochie isi mmalite.
Nchọpụta n'oge na-adaberekwa na ọganihu teknụzụ. Na Mee 21, ndị otu Novel Coronavirus Traceability Team nke Shenzhen Center for Disease Control and Prevention nwetara ọrụ ngwa ngwa iji duzie nyocha traceability nke ihe atụ sitere na mba ofesi metụtara ọrịa asymptomatic aha ya bụ Mu na Yantian District. Site na nkwado nlele, iwu ụlọ ọbá akwụkwọ, usoro kọmputa, usoro ihe omume, ntụnyere mkpụrụ ndụ ihe nketa, ruo n'ịde akụkọ nyocha traceability, ọ were naanị awa 27, dị mkpụmkpụ karịa ọkọlọtọ mba nke awa 76.
Ndị otu niile nke Sun Master ga-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ma kwado nke ọma na usoro mgbochi ọrịa gọọmentị, dị ka iyi mkpuchi na ịnweta ọgwụ mgbochi. Iji nyere aka gbochie Covid-19. Anyị ji GuangDong aṅụrị.